Nepalistudio » विकृतीको रुपमा मौलाउँदैछ ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् प्रेम दिवस विकृतीको रुपमा मौलाउँदैछ ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् प्रेम दिवस – Nepalistudio
विकृतीको रुपमा मौलाउँदैछ ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् प्रेम दिवस
तेस्रो शताब्दीको अन्त्यतिर रोमबाट प्रारम्भ भएको यस भ्यालेन्टाइन डे को इतिहासलाई फर्केर हेर्दा एकजना रोमका सम्राटले नारीसँगको सम्बन्धका कारण सुरक्षाकर्मीहरू मार्फत गोप्य कुराहरू बाहिर जाने डरले प्रेम र विवाहमा रोक लगाउने आदेश जारी गरे । सम्राटको आदेशलाई एकजना सन्त भ्यालेन्टाइन नामका व्यक्तिले उल्लङ्घन गरेको थियो । एकजना सर्वसाधारणले आफ्नो आदेशको उल्लङ्घन गरेको कारण सम्राटलाई सह्य भएन र उक्त व्यक्ति भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिए । उनलाई मृत्युदण्ड दिइएको दिन १४ फेबुअरीमा संसारमा ‘भ्यालेन्टाइन डे’ मनाउने प्रचलनको आरम्भ भएको हो ।
सर्च इन्जिन गुगल खोजमा ‘भ्यालेन्टाइन डे’ खर्च गर्दा १७ करोड ३० लाख भन्दा बढि नतिजा देखाउँछ भने लाखौं पेजले मायाको परिभाषा दिएका छन् । प्रेमको परिभाषा जति गरे पछि अपूरो नै हुन्छ । अंग्रेजी साहित्यमा पिएचडी गर्दै गरेकी श्रीमति सुमित्रा घिमिरे भन्छिन्- ”मायालाई परिभाषामा बाँध्नै सकिँदैन ।” आजभोलिका युवावर्गहरुले मायाप्रेमलाई जुन कोणबाट हेरिन्छ, त्यहि अनुसारको अनुभूति हुन्छ । अहिलेको युवा जमात भौतिक नजरले हेर्छ, त्यसैले उपहारमा साट्छ माया र त्यसैमा अनुभव गर्छ । उहाँ थप्छिन् । त्यसैको परिणाम हुन सक्छ ।
यस दिवसको अवसरमा संसारभरि कार्ड र गिफ्ट पसलहरुमा प्रेमी प्रेमिकाको भीड लागेको हुन्छ । नेपालमा पनि बढी जसो सहरी भागमा यसको चहल पहल बढेको पाइन्छ । राजधानीको मुख्य भागहरु जस्तैः न्यूरोड, पुतलीसडक, घण्टाघर, खिचापोखरी, दरवारमार्ग, लगनखेल, भाटभटेनी लगायतका स्थानमा खोलिएका गिफ्ट पसलहरुमा यो समयमा निकै ठूलो भीड लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
‘भ्यालेन्टाइन डे’ जति नजिकिइदैंछ, फूल तथा कार्ड व्यवसायीहरू आफ्नो पसल सजाउन उत्तिकै उत्साहित भएका छन् । न्यूरोडका एक व्यापारी भन्छन्, ‘हाम्रो कमाई राम्रो हुने समय भनेकै भ्यालेन्टाइन डे हो ।’ भ्यालेन्टाइन डे धुमधामका साथ मनाउने मध्ये बढी जसो दसजोड दुई र क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थी भएको अर्का व्यापारी बताउँछन् । ‘यो समयमा उपहार छनौट भन्दा युवा-युवतीहरू आकर्षक प्याकिङ्ग चाहन्छन् ।’
भ्यालेन्टाइन डे लाई उपहार मार्फत प्रेम साटासाट गर्ने पर्वको रूपमा लिएकी छन्, धापासीकी कोहिनूर गुरुङ्गले । तर, यो दिन आत्मिय दिन भएकोले परिवारका सदस्य संगै बसेर मनाउने उनको सोचाई छ । विशेषगरि यसदिन आफूले चाहना गरेकोलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नु यसदिनको विशेषता नै हो, यसदिन कुनै पनि युवा अथवा युवतीले एक आपसमा विना कुनै सङ्कोच प्रेम प्रस्ताव राख्न सक्छन् ।
एक एफ.एम. रेडियोको मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालक (आर.जे.) रामकृष्ण बजगाइँ तेस्रो शताब्दीदेखि चल्दैआएको उपहार आदान प्रदान गर्ने चलनले विश्वभरी महत्व पाएको बताउँछन् । यस्ता कुराले संस्कृति बिगार्यो बिगारेन भन्दा पनि अरूको अहित नगर्नु नै प्रमुख भएको उनी थप्छन् । सो दिन आफ्नै कमाईले प्रेमिकासँग डेटिङ्ग जाने उनी बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नानतकोत्तर अध्ययनरत हरि लम्सालको विचारमा भ्यालेन्टाइन डे ले नेपाली संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरेको आरोप छ । उनका अनुसार यस दिनको प्रभावले वसन्त पञ्चमीको आकर्षालाई कम र ओझेल गरेको छ । सञ्चार माध्यमले वसन्त पञ्चमीको दिनलाई प्रेम दिवसको रूपमा प्रचार गरे यसको महìव बढ्ने उनको धारणा छ । पाल्पाको रानीमहल, काठमाडौंको रानीपोखरी पनि प्रेमको प्रतिकका रूपमा लिइन्छ । फागुपूर्णिमालाई प्रेम, सद्भाव बाँड्ने पर्वको रूपमा लिइन्छ । तर यी सबैलाई ओझेल पारिएको उनको आरोप छ ।
त्यस्तै धारणा अधिवक्ता सुमन ताम्राकारको छ । उनको विचारमा भ्यालेन्टाइन डे वकबास र पश्चिमी संस्कृतिको नक्कल बाहेक केही होइन । अहिलेका युवा युवतीमा हाम्रो चाड पर्वको चर्चा छैन, तर भ्यालेन्टाइन डे का बारेमा विज्ञ छन्, हामी आफ्नो थुप्रै मौलिक संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ यसको जिम्मा आजका युवापीँढीले लिनु पर्छ ।
तर, अर्की महिला शिक्षिका सुश्री निलम प्रधान भने भ्यालेन्टाइन डे लाई सकरात्मक रूपमा लिन्छिन्- “हाम्रो पालामा पनि भ्यालेन्टाइन डे भइदिएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो पालामा चिठ्ठी लेखेर, आँखा आँखा जुधेर प्रेम हुन्थ्यो । अहिले सोझै फूल दिएर प्रेमको निवेदन गरिन्छ । यसलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।”
भ्यालेन्टाइन डे मनाउनुमा अप्ठेरो छैन, तर हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणमा समेत ख्याल राख्नुपर्ने सबैको धारण रहिआएको छ । भ्यालेन्टाइन डे मा प्रेम-प्रेमिकाबीच सबैभन्दा धेरै रातो रङ्गको गुलाफको फूल आदान-प्रदान हुन्छ । यो दिन विश्वभरी करोडौं डलरको गुलाफको फूलको व्यापार हुने गर्दछ । नेपालमा पनि यसदिन हजारौं गुलाफको फूल विक्री हुने गर्दछ । पुतलीसडकको एक गिफ्ट पसलका सुमन मानन्धर भ्यालेन्टाइन डे का अवसरमा आफ्नो निकै गिफ्ट आइटमहरू जाने बताउँछन् । भ्यालेन्टाइन डे सुरु हुनु पर्ूवका ३-४ दिन अघिदेखिनै पसलमा निकै घुइँचो हुने र सो दिनमात्र करिब ५०० वटा गुलाफको फूल बिक्री हुने गर्दछ । उता त्रिपुरेश्वरको फूल व्यापारी मुन्ना शाहका अनुसार आफ्नो फूल दोकानबाट मात्र यस भ्यालेन्टाइनका दिन १ हजारभन्दा बढी गुलाफको फूल विक्री हुने बताउँछन् ।
कुन रंगको गुलाफको फूलको प्रतिक के हो यसबारेमा केही जानकारी लिने हैन –
रातो गुलाफः शान्ति, प्रेम र क्षमताको प्रतिक
रातो गुलाफ प्रेम र मनोभावनाको प्रतिक हो । भ्यालेन्टाइन डे मा सबैभन्दा धेरै रातो रङ्गको गुलाफ आदान-प्रदान हुन्छ । यसलाई प्रेम-प्रस्तावका रूपमा प्रदान गरिन्छ । फूल स्वीकार गर्नु प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरेको कुराको प्रतिक हो ।
गुलाफी गुलाफः मित्रता र मुटुको धड्कनको प्रतिक
यो रङ्गको गुलाफ मित्रता र मुटुको धड्कनको प्रतिक मानिन्छ । भ्यालेन्टाइन डे मा गुलाफी रङ्गको गुलाफ दिनुको अर्थ मेरो मुटुको धड्कन अब तिम्रो लागि मात्र धड्की रहेको छ भन्नु हो । अर्थात् मेरो मुटु तिम्रो लागि हो ।
पहेँलो गुलाफः मित्रताको प्रतिक
पहेँलो गुलाफ मित्रताको प्रतिक मानिन्छ । फ्रेण्डशीप डे’ अर्थात् मित्रता दिवसका दिन पहेँलो गुलाफ प्रदान गरिन्छ । तर, पनि हिजोआज मित्रताको प्रतिकका रूपमा भ्यालेन्टाइन डे मा पनि यसको प्रयोग हुन थालिसकेको छ ।
सेता गुलाफः साँचो प्रेम र स्वच्छ हृदयको प्रतिक
सेतो गुलाफ साँचो प्रेम र स्वच्छ हृदयले दिइन्छ । भावुकताले भरिएको सन्देश दिनमा सेतो गुलाफले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
कालो गुलाफः बिदाईको प्रतिक
कालो गुलाफ बिदाईको प्रतिक मानिन्छ । यदि कुनै कारणवश प्रेम सम्बन्ध जारी राख्न सम्भव छैन भने कालो गुलाफ दिएमा आफ्नो कार्य पुरा हुन्छ ।
प्रेम व्यक्त गर्न फूलहरू मात्र नभएर अन्य प्रतिकहरू पनि प्रचलित छन् । यस्ता प्रतिकहरूमध्ये एउटा वाणले हृदय चिरेर गएको प्रतिक सबैभन्दा प्रचलित छ । प्रेमी-प्रेमिकाहरूका लागि हृदयभन्दा राम्रो प्रतिक अरू हुन सक्दैन । कसैलाई यो उपहार दिनुको अर्थ तपाईंले उसलाई र्सवस्व सुम्पन चाहनुहुन्छ भन्ने हो । यो संकेतले तपाईंको हृदय उसको प्रेमको वाणले घाइते भएको छ भन्ने देखाउँछ । प्रेम पंक्षी (लर्डवर्ड) पनि प्रेमको प्रतिक हो । प्रेम-प्रेमिकाको साथ (जोडी) विना यो बस्न सक्दैन भन्ने धारणा छ ।
ख्रिष्टियन धर्मका अनुसार प्रेम पंक्षी (लर्डवर्ड) निर्मलता र प्रेमको प्रतिक हो । त्यसैले भ्यालेन्टाइन डे को दिन यसको प्रशस्त प्रयोग गरिन्छ ।
२०६८ माघ २८ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित
१ फाल्गुन २०७४, मंगलवार प्रकाशित